YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, June 08
ပီတာညွှန့်မောင်ထံသို့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီမှ အကြွေးတောင်းစာ
ဒုဗိုလ်ချူပ်ကြီး မြတ်ဟိန်းရဲ့ ယောက်ဖ ဟာမိုနီဆားဗစ်ဆက်ကုမ္ပဏီရဲ့Managing Director ဦးပီတာညွှန့်မောင်ထံသို့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီမှ အကြွေးတောင်းစာ မြန်မာ၊ဂျပန်....
မြန်မာပြည်မှာ မတန်တဆဈေးနဲ့ ငွေတွေလက်ခံပြီး ယူပါတယ်။ ဦးပီတာညွန်မောင်တို့က အလုပ်သင် Visa နဲ့ ဂျပန်သွားမယ့် သူတွေကို အကျိုးဆောင်ခလည်း ယူသလို ထွက်ပြေးရင် သိန်း၃၀ပေးရမယ် .. ဆိုပြီး စာချုပ်ချုပ်ပါတယ်။ အခု ဂျပန်ကုမ္ပဏီက Train Visa နဲ့လာသူ(၁၄)ဦး မြေလျှိုးပြီး မိုးပျံ ပျောက်ဆုံးသွားလို့ ဆုံးရှုံးခ ငွေတွေ ပြန်တောင်းနေပါပြီ။ ဂျပန်ကုမ္ပဏီက အစစအရာရာ အကုန်ခံပြီးခေါ်ရတာလေ.. မြန်မာပြည်မှာလိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ဆွေမျိုးတော်တယ်ဆိုပြီး ပါဝါအာဏာပြလို့ မရပါ...။
ဥပဒေရဲ့ အထက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်တွေပဲရှိရမယ်...
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ဟိန်းရဲ့ သားတစ်ယောက်မှ လူတစ်ယောက်ကို ကားမတော်တဆတိုက်မြိပီး သေဆုံးစေခဲ့တာ သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက သူတို့ မိသားစုတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုး ဟာမိုနီ သိန်းထွန်း မှတဆင့် အနော်ရထာလမ်းက ရွှေဆိုင်မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာတွေ ရောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့မိသားစုဟာ ကွယ်လွန်သူ မိသားစုတွေအတွက် အခန်းတစ်ခန်း နှင့် ငွေအချို့ပေးခဲပါ့တယ်။ ဒါကြောင့်ဘဲ ဒီကားတိုက်သေဆုံးမှု ဟာပျောက်ကွယ်ခဲ့ရပြီး ကားတိုက်မှုဖြစ်တဲ့ ဒီ Mark2ကားကိုလည်း လဲခဲ့ပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတဲ့ ပါဝါ နဲ့ ငွေ ကြောင့် ကားတိုက်မှု ဖြစ်တဲ့ လူသတ်တရားခံနဲ့ ဥပဒေ ပျောက်ကွယ်နေရပါပြီ။
ပေးပို့လာသူ အတွင်းသိ အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/08/20100အကြံပြုခြင်း
8 May 2010 ဒိုင်ယာရီ
8 June 2010 yeyintnge Diary.doc( MS work)8 June 2010 Yeyintnge Diary
အောင်ကျော်ခင် / ၀၈ ဇွန် ၂၀၁၀
“အခန်း (၁၄) ကူးပြောင်းရေးကာလ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ” ဆိုတာဟာ နအဖအုပ်စု မတရားလုပ်ထားတာတွေကို အရေးယူခွင့်နဲ့ တရားစွဲခွင့်မရှိဘူးလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတာပဲ။ နအဖအဖွဲ့ဝင်တဦးဦး (သို့မဟုတ်) အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တဦးဦးရဲ့ တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်ချက်ကို တရားစွဲခွင့်နဲ့ အရေးယူခွင့်မရှိဘူးလို့ ပုဒ်မ (၄၄၅) က ဆိုတယ်။ ဒါပေမယ့် ICTJ - Internationa Center for Transitional Justice က ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာမှာ ထုတ်ဝေတဲ့ (၄၅) မျက်နှာစာတမ်းမှာတော့ နအဖလုပ်သမျှကို အခြေခံဥပဒေက မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတယ်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်တာမျိုးဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အပြစ်ရှိတဲ့အတွက် အခြေခံဥပဒေက မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတယ်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်တာမျိုးကို အရေးယူဖို့နဲ့ ကာကွယ်ဖို့အတွက် ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ၁၉၅၆ နဲ့ ၁၉၉၂ ဂျနီဗာသဘောတူချက်ကို ဗမာအစိုးရ အတည်ပြုပြီးဖြစ်လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနဲ့ နအဖအခြေခံဥပဒေ ပဋိပက္ခဖြစ်နေတယ်။
တချို့ကလည်း နအဖရဲ့အစီအစဉ်မှာ ၀င်ရောပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်း အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ယူမယ်လို့ စိတ်ကူးတယ်။ နအဖအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ချင်ရင် ပထမဦးစွာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၇၅) ရာခုိင်နှုန်းကျော်က ထောက်ခံရမယ်လို့ ဖော်ပြထားတယ်။ နောက်တော့ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပရမယ်လို့ဆိုတယ်။ ကြံ့ဖွံ့၊ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းနဲ့ အရပ်သားကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်းက (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိတာမို့ ဒါကို ကျော်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပဲ။ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းဟာ စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေတာကြောင့် အထဲဝင်ပြီး အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ယူမယ်ဆိုတာဟာ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်သဘောပဲဖြစ်နေတယ်။ တွေးကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ် ပြေးကြည့်စရာ မလိုပါဘူး။ အစိုးရပုံစံပြောင်းသွားပေမယ့် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကတော့ မစနိုင်သေးပါဘူး။
ဧရာဝတီ Tuesday, June 08, 2010
အင်န်အယ်ဒီ နာမည်ပါရင် လူရိုသေမလားလို့....
မန္တလေးမြို့ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုဖြစ်သော ၀ံသာနု NLD (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ) ပါတီသည် လာမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက် ပွဲတွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရာ၌ ယခင်က တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း ၌သာ စည်းရုံးရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ သော်လည်း အသင်းသား အားလုံး၏ သဘော တူညီချက်ဖြင့် ပြည်ထောင်စု တစ်ဝန်းလုံးတွင် စည်းရုံး မည့် ပါတီ အဖြစ် မှတ်ပုံတင် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ "အစပိုင်း မှာတော့ မန္တလေးတိုင်း အခြေစိုက် အနေနဲ့ပဲ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် ဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အသင်းသား အားလုံးရဲ့ သဘော တူညီချက် နဲ့ တခြား တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေက စိတ်ဝင်စား သူတွေ အဖွဲ့အစည်းတွေ လည်း ပါဝင် နိုင်အောင်၊ ပါတီ အနေနဲ့လည်း ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက် နိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်း အတာနဲ့ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက် တာပါ" ဟု အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နန်းရွှေကြာက ပြောသည်။
ထိုသို့ လွှတ်တော် သုံးရပ် စလုံးတွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရာ၌ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ နှင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပါတီတို့ကို အဓိက ယှဉ်ပြိုင် ရဖွယ် ရှိ ကြောင်း ဒေါ်နန်းရွှေကြာက ဆိုသည်။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မ ရှင်သည် နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်ခွင့် များကို စိစစ် ခွင့်ပြုပေးလျက် ရှိရာ မေလ ၂၈ ရက်နေ့ အထိ နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း ၂၄ ခုကို မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် မှတ်ပုံ တင်ခွင့် ရရှိ ပြီးသော နိုင်ငံရေး ပါတီများက သတ်မှတ် ထားသည့် ပါတီဝင် အင်အား စာရင်း ကို ကော်မရှင်သို့ တင်ပြရန် ကြေညာချက် အမှတ် (၆၄ ။၂၀၁၀) ကို မေလ ၂၈ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၅(စ) နှင့် အညီ ပြည်ထောင်စု တစ်ဝန်း လုံးတွင် စည်းရုံးမည့် ပါတီ ဖြစ်ပါက နိုင်ငံရေး ပါတီ အဖြစ် မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုသည့် နေ့မှ စ၍ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ပါတီဝင် ဦးရေ အနည်းဆုံး ၁,၀၀၀ နှင့် တိုင်း ဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည် နယ် တစ်ခု အတွင်း၌သာ စည်းရုံးမည် ဆိုပါက မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြု သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ပါတီဝင် ဦးရေ အနည်းဆုံး ၅၀၀ ကို ကော်မရှင်သို့ တင်ပြ ရမည် ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ချက် အတိုင်း တင်ပြ ဆောင်ရွက် နိုင်ခြင်း မပြု နိုင်လျှင် ယင်း ပါတီအား နိုင်ငံရေး ပါတီ အဖြစ် မှတ်ပုံ တင်ထား ခြင်းကို ပယ်ဖျက်၍ ပါတီ ကိုလည်း ဖျက်သိမ်း ရမည်ဟု နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံ တင်ခြင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ တွင် ပြဌာန်း ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာတိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၈ . ၆ . ၂၀၁၀
မင်းက UMFCCI ကို သွားချင်၊ ငါက ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ချုပ်ကို သွားချင်နဲ့ ညှိမရတဲ့အဆုံး
ကိုယ့်လမ်း ကိုယ်သွားခဲ့တယ်။ ဂျူး ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဘာသာရပ်ကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ 
ကောင်းမှာပါ။ ငါကတော့ မောင်ဝံသ ဆီ ရောက်သွားတယ်။
၁၉၈၅ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက အတွေးအမြင် စာစောင်ကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းဖတ်ခဲ့ပြီး
မောင်ဝံသ ကို သတိပြုမိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအုံကြွမှုကြီးအပြီး ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD
အမတ်မောင်ဝံသ၊ နောက် ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့ မောင်ဝံသလို့ သိခဲ့ရပါတယ်။
အပြင်ပြန်ရောက်ပြီး NLD နဲ့ မောင်ဝံသ ဝေးခဲ့ပုံရပါတယ်။ စာရေးဆရာ၊ မီဒီယာသမား
အဖြစ် နောက်ပိုင်း ပြန်ပေါ်လာတာ တွေ့ ရတယ်။
သူကတော့ နေရာမှန် ပြန်ရောက်တယ် ပြောပါတယ်။ ၁၀ နှစ်တာ ကာလအတွင်း လူအများ
ရှေ့ စင်မြင့်ထက် ပထမဆုံးပြန်တက်တဲ့ ပွဲ လို့ ဆိုပါတယ်။ ပရိသတ် ၁၇၀ ကျော်လောက် လာကြတာ
နိုင်ငံရေးဘက် အလေးကဲပြီး ပြောသွားတာတွေ့ ရသလို မေးကြတာတွေအများစုဟာလည်း
နိုင်ငံရေးနဲ့ နွယ်ယှက်တဲ့ မေးခွန်းတွေပါ။ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ...စတဲ့အမေးတွေကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ဖြေသွားပါတယ်။
ဟောပြောပွဲမ စ ခင် ဟောပြောသူရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ဖတ်ပြတဲ့အခါ NLD မှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ 
နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုကို မကြားရတာ စိတ်မချမ်းမြေ့ ဖွယ်ကောင်းပါတယ်။
တရားဝင်ပါတီအဖြစ် မရှိတော့တဲ့ NLD ကို မေ့ထားရမယ့်အချိန်မှာမှ စိုးရိမ်စိတ် တထိတ်ထိတ်
ဖြစ်နေကြတာ ငါတော့ နားမလည်နိုင်ဘူး။
မိုးကြိုးပစ် ထန်းလက်နဲ့ ကာလို့ မရလောက်အောင် အဘက်ဘက်က အောက်တန်းနောက်တန်း
ကျနေတဲ့ ငါတို့ နိုင်ငံ၊ ငါတို့ လူမျိုးကို ပြန်လည်ဆယ်ယူတွန်းတင်ဖို့ ရာ ငါတို့ မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ငါတို့ ဘဲ လုပ်ရမယ်။ လုပ်ချင်လွန်းလို့ လုပ်တာဘဲ ဖြစ်ရမယ်။
ရိုးသားတဲ့မျိုးချစ်စိတ်ကို ဆုတ်ကိုင်ပြီး အမျိုးသားဦးမော့ရေးအတွက် လုပ်ကြကိုင်ကြတဲ့
အခါ ခေါက်ရိုးကျိုးအကျင့်ဟောင်းနဲ့ အရိုးစွဲအကြောက်ဟောင်းတွေကိုမှ ခါ မထုတ်နိုင်ရင်တော့
ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေး နေဦးမှာဘဲ။
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ မရှိတော့ဘူး။
ဒါ ...ပကတိ အရှိတရားဘဲ။
နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးနဲ့ အသွင်ပြောင်းရေးအတွက် နေရာပေါင်းစုံ၊ ထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ
အသိရှိရှိ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်တွေမှာ ကွက်လပ်တွေ ချန်မထား
အထူးသဖြင့် အဲဒီ ပါတီ ၃ ခုမှာ ၀င်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့သူတွေ ပိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။
ကွက်လပ်တွေပါတဲ့ ကိုယ့် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကို ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြီး ကျေနပ်နေမှတော့
တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှလုပ် မနေပါနဲ့ တော့။
မုန့် ဟင်းခါးသာ ရောင်းစားကြပါတော့ .....။
aungmyo tun <8layloneamt@gmail.com>
ကိုအောင်မျိုးထွန်းထံ လိပ်မူပြီး အောက်ပါ ပြန်စာကို ပို့ထားပါတယ်။
ဖတ်ကြည့်ပြီး မိတ်ဆွေများကို ပြောပြလိုက်ပါခင်ဗျား။
ကျွန်တော် ရေးပေးတဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်မှာ အကုန်အစုံပါပါတယ်
သတင်းစာသပိတ်ကို ခေါင်းဆောင်ခဲ့လို့ အလုပ်ပြုတ်ခဲ့တာရော၊
NLD တာဝန်တွေရော၊ ထောင်ကျတာတွေရော၊ အမတ်ရွေးခံရတာရော
အဲဒီမှာ ရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးခင်မောင်သန်းက ထပြီး ၀န်ခံသွားပါတယ်
သူ့သဘောနဲ့သူ ဖြတ်တောက်ပစ်တာပါလို့ သူပြောသွားပါတယ်။
ကျွန်တော် ကွက်လပ်ချန်တာ မဟုတ်ပါ
NLD မှာ (၁) ပဲခူးတိုင်း စည်းရုံးရေးမှူး၊ (၂) ဗဟိုကော်မတီဝင်၊ (၃) ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်
(၄) တတ်သိပညာရှင် ဗဟိုအဖွဲ့ဝင် အဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲသလို လုပ်ခွင့်ရခဲ့တာကို ဘ၀တစ်သက်တာ ဂုဏ်ယူစရာ အဖြစ်တောင် အောက်မေ့ပါတယ်။ ထိမ်ချန်လိုစိတ်လုံးဝမရှိပါ။ ကျွန်တော် တတိယအကြိမ် ထောင်မှာ ၅နှစ်ကျော်နေခဲ့ရပြီး ၂၀၀၁ ဇွန်လ ၁၃ရက်မှာ လွတ်တယ်။ ဇူလိုင် ၉ ညမှာ ဒေါ်စု (အိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ရှိနေဆဲ)က ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကို ကျွန်တော့်အိမ်လွှတ်ပြီး NLD မှာ ပြန်လည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ပြောတယ်။ ဦးလွင်နဲ့ သွားတွေ့ သတင်းပို့ဖို့ မှာပါတယ်။ နောက် ၂ရက်အကြာမှာ ကျွန်တော် ဦးလွင်ဆီကို သွားတွေ့တယ်။
ဦးလွင်နဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အာရုံသိနဲ့ သိလိုက်တယ်။ အရင်လို ကျွန်တော် ဆက်လုပ်ဖို့ မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာပဲ။ ရုံးကပြန်လာပြီး ဒေါ်စုဆီကို ပုဂိုလ်ရေး စာတစ်စောင်ရေးတယ်။
ကျွန်တော့်ကို ခွင့်ရက်ရှည်လို့ပဲ သဘောထားပါလို့ ရေးလိုက်တယ်။ ဦးလွင်ကတဆင့်ပဲ
အဲဒီစာ ပို့လိုက်တယ်။ စာတွေပဲ ဖိရေးပြီး ပါတီနိုင်ငံရေးက နားနေခဲ့တယ်။
ဦးဝင်းတင်လွတ်လာတော့လဲ ကျွန်တော် အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြီး ဒီအတိုင်း ဆက်နေခဲ့တယ်။
ပါတီမှာ တာဝန်ယူမလုပ်ပေမယ့် ကျွန်တော် စာတွေရေးနေတာဟာ နိုင်ငံရေးတာဝန်တစ်ခု mission တစ်ခုကို ထမ်းဆောင်နေတာပဲလို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်။ ပါတီရုံးမှာ သွားထိုင်ပြီး တာဝန်ယူနေတာထက် မလျော့ဘူးလို့ ပြောဝံ့တယ်။
ကျွန်တော်ဟာ နိုင်ငံရေးခံယူချက်မှာရော၊ ကိုယ်ကျင့်သီလပိုင်းမှာရော၊ နိုင်ငံရေးသီလပိုင်းမှာရော
ဘယ်တော့မှ ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်မဖြစ်စေရဘူးဆိုတာကို ခင်ဗျားတို့ကို တိုင်တည်ပြီး ပြောချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် ရပ်တည်ချက်ကို ယုံကြည်နိုင်ကြပါတယ်။
ချွေးများရပ်တန့် မနေခဲ့လေ ။။။။။
အောင်ပွဲအတွက် အတိတ်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီမို့
နံရံပေါင်းများစွာ ဖြိုဖျက်လိုက်ကြရအောင် ။။။။။။။။။
( နိုင်ငံတကာ ကဗျာ နေ့ ဖြစ်သော မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့အတွက် ရေးစပ်သီကိုးသည် )
Freedom Vigil to honour Aung San Suu Kyi and human...